कठै हाम्रा सिल्ली प्रधानमन्त्री ! मेयरका भतिजा र एसपीका छोरा जोगाउन आेलीले बोले यस्तो झुट - info4nepal
कठै हाम्रा सिल्ली प्रधानमन्त्री ! मेयरका भतिजा र एसपीका छोरा जोगाउन आेलीले बोले यस्तो झुट
काठमाडाैं । जनताको सेवक बन्न राजनीतिमा होमिएका नेताहरुले आखाँ अगाडी झुठो कुरा बोल्दा कस्तो होला ? पक्कै पनि मानिसलाई झुठ बोल्ने नेतालाई विश्वास गर्दैनन् र उसको बोली व्यवहारलाई अर्को निर्वाचनमा सधैका लागि ढोका बन्द गरि दिन्छन् ।
तर, नेपालमा उच्च तहका मानिसहरु खुलेआम झुठ बोलेर मानिस बेवकुफ बनाउने कुरा त सामान्यजस्तै बनेको छ । यसैमा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आशिन मानिसले झुठ बोेलेर मानिसलाई नकारात्मक बाटोतर्फ हिडाउन खोज्छ भने त्यसलाई जुन सजाय दिएपनि कमै हुन्छ होला सायद ।
ठ्याक्कै यस्तै घटना घटाएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आेलीले । कञ्चनपुरमा भएको रहस्यमय घटनालाई लिएर लासको राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाउदै झुठ भन्दा महाझुठ कुरा बोलेर प्रधानमन्त्री आेलीले मेयरको बचाउ गर्न खोजेका छन् ।
बुधवार प्रशारण भएको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले निर्मला पन्तको शवलाई भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टको घरमा, आँगनमा लगेर राजनीति गर्न खोजिएको भन्दै गरेको कुरालाई लिएर उनको सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।
कञ्चनपुर घटनामा राजनीति भइरहेकोबारे कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘पोस्टमार्टम गरेर घरमा लगेको लास, घरबाट उठाएर मेयरको घरमा पुर्‍याउनुपर्ने, त्यो के भएको हो ? परिवारले त सद्गत गर्न लैजाँदैथ्यो ? उनीहरूबाट खोसेर मेयरको आँगनमा लानु भनेको के हो ? यसभित्र के छ त ?’ तर, स्थानीयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बोलेको घटनाक्रम महेन्द्रनगरमा भएकै छैन ।
बलात्कार पछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको शव मेयरको घरमा नलगेर आफन्तले दाहसंस्कार गरेका थिए । तर, आेलीले यसै कुरालाई झुठको सहारा लिएर गलत प्रचार गरेर घटनालाई बङ्ग्याउन खोजेका छन् ।
पीडित आमाबुवाको आँखामा आशुको बलधारा बगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले गलत कुरा गरेर मेयरका भतिजा र एसपीका छोरालाई वचाउन खोजेका त होइनन् ? यस्तै प्रश्नले मानिसहरुमा आतंक सिर्जना भएको छ ।
प्रम आेली बम दिदी बहिनीको पक्षमाः महिला हिंसा भयो, अनुमानका भरमा फसाउन गाैरा पर्वमै आन्दोलन चर्काउने कुरा कसरी आयो ?
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री आेलीले बम दिदी बहिनीलाई अनावश्यक रुपमा टर्चर दिइएको भन्दै महिला हिंसा भएको जिकिर गरेका छन् ।
जनतासँग प्रधानमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै आेलीले बम दिदी बहिनीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्न थालिएको भन्दै कड्किएका छन् ।
आेलीले बने, ‘यदि उनीहरुको अपराध छ भने उनीहरुलाई कारवाही गराैं । तर, उनीहरुलाई कारवाही गर्न भन्दा के के गरिया छ ? समाजले के भन्या छ ? यस्तो गर्न हुन्छ ? महिला हिंसा भएन ? तिनीहरु दोषी हुन् ? की होइनन् ? पहिले छानविन हुन पर्यो । छानविनबाट दोऋि देखिन्छन की देखिदैनन् ? प्रमाणित हुन्छ की हुँदैन ? ती पनि महिला होलान । अविवाहित केटी होलान । तिनको पनि जीवन होला । तिनका पनि सपनाहरु होलान। ति पनि महिला हुन तिनको पनि इजजत छ । अनि अनुमानका भरमा आब्रु, इज्जत हुर्मत लिने ? अनुमानका भरमा तथानाम गर्ने ? यति जान्थ्ये । उति जान्थ्ये । यस्तो हुन्थ्यो । उस्तो हुन्थ्यो ।त्यहाव जान्थ्ये । डान्सबार यस्ता कुरा उछालेर र झुठ र अनुचित कुरा उछालेर कोहिमाथि । कोहि मान्छे मन नपर्न सक्छ । कोहि छिमेकी मन नपर्न सक्छ । कसैका बाबुआमा कोहि पातर्टीलाई भोट देलान ।’
एउटा बालिका मारिएको छ । अरु बालिकाहरुमाथि अप्रमाणित आरोप लगाएर भयंकर कुरुप आक्रमण हुनु महिला हिंसा होइन ? भन्दै बद दिदी बहिनीको वचाउ गरेका छन् ।
गाैरा पर्वका नाममा आन्दोलनको माग गर्नु समेत रहस्यमय भएको भन्दे आेलीले पर्वको खिल्ली उडाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपाका नेता भीम रावलले कुम जोडेर गाैरा पर्वमा खुलामञ्चमा गाैरा खेलेको विषयलाई उनले कटाक्ष गर्दै अराजनीतिक मानिसको झुण्डको आरप समेत लगाए ।
कांग्रेस हामी हाँक्छौँ जसको लागि नेतृत्वमा धकेलेर भए पनि गइन्छ, गएनौँ भने हाम्रा बकबक मात्र हुन्छ
ranjan December 23, 2018
प्रचन्ड पत्नी को नाम मा ज्वाला का मुटू हल्लाऊने दूई शब्द हरू
ranjan June 27, 2018
रुदै गरेका केपि ओलिको भिडियो एकाएक भाइरल भयो हेर्नुहोस
ranjan July 8, 2018
प्रकोप-पीडितलार्इ राहत नदिने सरकारी तयारी, घरबार गुमे पनि राहत नपाउने !
ranjan July 3, 2018
नेपाली कांग्रेसलाइ कमजोर सम्झनु तालमा नडूबि गहिराइ नापे जस्तो हो : कांग्रेस अहिले पनि बलियो छ
ranjan December 21, 2018
देख्यौ प्रधानमन्त्री ओली, माईतिघर मण्डलामा सिमित भएको कांग्रेस कत्रो रहेछ (फोटो फिचरहरु)